Huawei Consumer - ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း
Huawei Consumer Business Group (BG) သည် Huawei ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီး သုံးခု အနက်မှ တခုဖြစ်ပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ mobile broadband (MBB) ထုတ်ကုန်များ နှင့် home devices ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုတခုဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Huawei Consumer BG သည် ကမ္ဘာတွင် စမတ်ဖုန်း တင်ပို့ရောင်းချမှု အဆင့် (၃) နေရာတွင် တည်ရှိနေပြီး [IDC、SA、Gartnerinsert analyst firms စစ်တမ်းများအရ], MBB ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့ရောင်းချမှုတွင် အဆင့် (၁) နေရာတွင် တည်ရှိနေပါသည် [insert time range2006] by [insert analyst firmsABI]. ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် Huawei သည် ပထမဆုံး တရုတ်ကုန်းပိုင်း အမှတ်တံဆိပ် အဖြစ် Interbrand's Annual Top 100 Best Global Brands Report တွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
HUAWEI - A positive energy which drives progress, dare us to challenge,and to create the amazing
Huawei Consumer Business Group (BG) သည် သူ၏ အမြင်ကို မိမိတို့၏အိပ်မက်များနောက်လိုက်သူများ၊ အမြော်အမြင်ရှိသောစိန်ခေါ်သူများ၊ မိမိတို့ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိ ရန်ထက်သန်သောယုံကြည်မှုနှင့်နိုးကြားထကြွဖျတ်လတ်သူများနှင့်အတူမျှဝေခဲ့ပါသည်။ သုံးစွဲသူများထံသို့ နောက်ဆုံးခေတ်သစ်နည်းပညာတီထွင်မှုတွေယူဆောင်လာပေးရန် နှင့် သာမန်ထက်လွန်ကဲထူးခြားသော အတွေ့ အကြုံများကိုနေရာတိုင်းအတွက်ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
Huawei Consumer Business Group (BG) သည် အာမခံရှိသောထုတ်ကုန်များ အပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်း၊ခြားနားသောဆန်းသစ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ နည်းပညာဆိုင်ရာအရေးပါသောရှာဖွေတွေ့ ရှိမှုများကိုရယူခြင်း၊နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကိုသုံးစွဲသူများထံသို့ ယူဆောင်ပေးခြင်း၊လူထုအနေနှင့်မိမိတို့ ၏အိပ်မက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်စေရန်အတွက်အားထုတ်မှုပြုလုပ်ခြင်းစသည်တို့ ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိသုံးစွဲသူများကို အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ပေးကမ်းနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Huawei Consumer BG သည် providesarange of products, the နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီနည်းပညာ ''Ultimate Technology" အဖြစ် Mate-series;နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်း ''Ultimate Fashion"အဖြစ် P-series ; the G-series for the သင့်တင့်သောတန်ဖိုး ''Ultimate Value"အဖြစ် G-series ၊သုံးစွဲရန်သင့်တော်သော ''Ultimate Accessibility". အဖြစ် Y-series များပါဝင်သော ထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ်မှုများကိုစီမံခဲ့သည်။
၂၀၁၄ နှစ်ကုန်တွင် Huawei ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၀ ကျော်သို့ ရောက်ရှိမိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံကျော်ကို ၀န်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ခဲ့ ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ကျော်ကြာ ကြွယ်ဝသော စီးပွားရေး အတွေ့အကြုံများဖြင့် တကမ္ဘာလုံးကို ချဲ့ထွင်ကာ ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများနှင့် လက်တွဲဖော် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အတူ သတင်းအချက်အလက် နှင့် နည်းပညာ ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် ကြီးမားသော တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကို သုံးစွဲသူများထံ အရောက်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ပြီး ဆက်လက်ကြိုးစားလျက်လည်း ရှိပါသည်။ အကောင်းမွန်ဆုံးသော သာလွန်ကောင်းမွန်သော အတွေ့အကြုံများကို အိမ်မက်သဖွယ် နေရာတိုင်းရှိ လူတိုင်းဆီသို့ အရောက်ပို့ဆောင် ပေးနိုင်ရန် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
R & D စင်တာ
R & D အလုပ်သမားများ
ံHuawei သည် ယူအက်စ်(US), ဂျာမနီ၊ ဆွိဒင်၊ ယူကေ( UK), ပြင်သစ်၊ ဂျပန်၊ ရုရှား၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ် စသည်ဖြင့်ကမ္ဘာ့တစ်ဝန်းရှိနိုင်ငံအနှံ့ အပြားတွင် R&D Center ၁၆ ခုကိုအခြေကျတည်ထောင်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါသည်။ Huawei တွင် ၀န်ထမ်းအယောက် ၇၀၀၀ ကျော်သည် သုံးစွဲသူများအတွက်ထုတ်ကုန်များနှင် R&D နှင့်ပါတ်သက်သော ဖြေရှင်းမှုများအတွက် အာရုံစူးစိုက်စွာ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး ၎င်းသည် Huawei Consumer BG ပျမ်းမျှလုပ်အား၏ ၅၀% ထက်ပိုသော ပမာဏ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် နည်းပညာပိုင်း၊ အခြေခံအတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများ ၊ စံချိန်စံညွှန်းများ နှင့် algorithms များပေါ်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ နှင့် အာရုံစူးစိုက်စွာ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး 4G and 5G wireless networks လုပ်ငန်းများ နှင့် chipsets လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လည်း အလေးထားလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ Huawei Consumer BG သည် ထုန်ကုန်ဖွဲ့ စည်းပုံများ၊ ဒီဇိုင်းများ၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ကင်မရာ၊ အတွင်းပိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၊ ဘက်ထရီသက်တမ်းများအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ Huawei Consumer BG သည် သုံးစွဲသူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့ အကြုံအသစ်များကိုဖန်တီးပေးရန် application ထဲသို့ ဆန်းသစ်သောနည်းပညာထားသိုထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
Consumer BG တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်
Consumer BG ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်
သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် , ၂၀၁၄ တွင် Huawei သည်မူပိုင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဆက်စပ်၍ Consumer BG ၁၂,၀၀၀ နှင့် မူပိုင် application ဒီဇိုင်း ၁,၀၀၀ ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ Applications ခွင့်ပြုချက်များအရ တရုတ်နိုင်ငံတွင် မူပိုင်ခွင့်၁,၆၀၀ ခု၊ US နှင့် ဥရောပကဲ့သို့ သောပြည်ပနိုင်ငံများတွင် မူပိုင်ခွင့် ၅၀၀ ခုထက်ကျော်၍ မူပိုင်ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် Huawei Consumer BG ၏ applications မူပိုင်အရေအတွက်သည် တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်လာပြီဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် မူပိုင် application အရေအတွက် ၁,၃၀၀ ( တရုတ်ပြည်တွင် ၇၀၀ နှင့် ပြည်ပအခြားနိုင်ငံများတွင် ၆၀၀ ခန့် နှင့်ညီမျှသည်) နီးပါးတိုးမြှင့်လျှက်ရှိသည်။
IEEE IETF 3GPP GSMA
ETSI WFA BBF NFC
M2M DLNA UPnP CCSA
Huawei သည် တရုတ်ပြည်တွင်း နှင့် ပြင်ပရှိ အခြားနိုင်ငံများရှိ စံအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော IEEE, IETF, 3GPP, GSMA, ETSI, WFA, BBF, NFC Forum, oneM2M, DLNA, UPnP, and CCSA စသည့် အဖွဲ့စည်းများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး Chairman and Vice Chairman နှင့် rapporteur စသည့် ရာထူးတာဝန်များဖြင့် အဖွဲ့အစည်း ၁၀ ခုကျော်တွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ဒါ့အပြင် မှတ်တမ်း ၇၀၀ကျော်ကိုလည်း ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများမှ နှစ်စဉ် ရရှိလျက်ရှိပါသည်။
Huawei မှတ်ပုံတင်မူပိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာများ
R & D မှရောင်းချမှုအချိုးအစားသို့ 
Huawei သည်အခြားကုမ္ပဏီများ၏ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုအစဉ်လေးစားသကဲ့သို့ မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုလည်းကာကွယ်ထားသည်။၂၀၁၃ နှစ်ကုန်တွင် Huawei သည် တယ်လီကွန်မြူနီကေးရှင်း(ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ) နှင့်သုံးစွဲသူဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်စပ်တူစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ကြားနေလိုင်စင်စီးရီးသဘောတူညီမှုတစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ Huawei သည် R&D တွင် Huawei မှနှစ်စဉ်ပျမ်းမျှရောင်းအား၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ( 10%) နီးပါးကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ဂျွန်လ နောက်ပိုင်းတွင်Huawei အနေနှင့် ၆၅,၀၀၀ ထက်ပိုသော ထင်ရှားသော applications များကို တရုတ်နိုင်ငံ ၊ US (ယူအက်(စ်) )၊ ဥရောပနိုင်ငံများတွင်ချဲ့ ထွင်ဖြည့်နိုင်ခဲ့သည်။
November 2014 တွင် Thomson Reuters မှ Huawei အား တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ်ထိပ်ဆုံး ၁၀၀ စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ Huawei သည် ထို ထိပ်ဆုံး ၁၀၀ စာရင်းမှတ်တမ်းတင်ခံရသော ပထမဆုံးနှင့်တစ်ခုတည်းသော တရုတ်ပြည်မကုမ္မဏီဖြစ်ပါသည်။
October 2014 : Huawei သည် 'Most Innovative Companies 2014" report မှ Boston Consulting Group's Top 50 စာရင်းတွင် အဆင့်၅၀ အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။
October 2014 : Huawei သည် LinkedIn မှပြုလုပ်သော ''World's 100 Most InDemand Employers of 2014" တွင် အဆင့် ၉၅ အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီး အဆင့် ၁၀၀ တွင်ပါဝင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော တရုတ်ကုမ္မဏီဖြစ်ပါသည်။
October 2014 2nd Annual Chinese Handset Industry Design Innovation Contest တွင် Huawei Ascend Mate7 သည် ''Swan Award" ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
October 2014 Interbrand's Top 100 Best Global Brands စာရင်းတွင် Huawei သည် အဆင့် ၉၄ အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ Huawei သည် ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်သောပထမဆုံးတရုတ်ပြည်မကုမ္မဏီဖြစ်ပါသည်။
EMUI 3.0 ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ Huawei သုံးစွဲသူများအတွက်ဖန်တီးထားပါသည်။ EMUI software တစ်ခုလုံးကိုအမြင်သစ်အသွင်သစ်များဖြင့်ထပ်မံတိုးမြှင့်ဖန်တီးထားရာHuawei အမာခံသုံးစွဲသူများအနေနှင့်ဖုန်းအသုံးပြုရာတွင်လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့်လည်းလွယ်ကူစွာစီမံအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
Ascend P7 Sapphire Edition သည် နီလာသလင်းကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမျက်နှာပြင်အသွင်ရှိသည့်တရုတ်ပြည်၏ပထမဆုံး 4G စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါသည်။
Ascend G7 သည် ၅.၅ လက်မရှိသော IPS မျက်နှာပြင်နှင့်ပါးလွှာသော ဆန်းသစ်သည့်ဒီဇိုင်းရှိပါသည်။ရှေ့ ကင်မရာ 5MP ရှိပြီးနောက်ကင်မရာ 13 MP ရှိသောသောကြောင်းအရည်အသွေးမြင့်သောပုံရိပ်များကိုရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည် 4G LTE အလျင်ရှိပါသည်။
Ascend Mate7 သည် ၆လက်မ FHD TFT IPS in-cell LCD မျက်နှာပြင်ရှိပြီးအလျင်နှေးသောသုံးစွဲကုန်ခမ်းမှုစွမ်းရည်ပမာဏရှိပါသည်။ ဆန်းသစ်သည့်လက်ဗွေရာဖတ်လုံခြုံရေးစနစ်ပါဝင်ပြီးမျက်နှာပြင်အကျယ် ၆လက်မရှိပါသည်။ အားကောင်းသော 4,100mAh ရှိဘက်ထရီ၊ ပို၍အားကောင်းသောocta-core Kirin chipset နှင့် အလျင်မြန်ဆုံး LTE Cat6 connectivity ဖြင့်ဖန်တီးပြုလုပ်ထားပါသည်။ Ascend Mate7သည် Android Central、Tom's Guide、Android Authority and GSM Arena တို့ အားဖြင့် ''Best of IFA 2014-Best Smartphone" ဆုကိုမှတ်တမ်းတင်ရရှိထားပါသည်။
IFA 2014 ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘာလင်မြို့ တွင် Huawei သည်ဖော်ပြပါ အရည်အသွေးမြင့် စမတ်ဖုန်းများနှင့် Huawei အမာခံအသုံးပြုသူများ၏အတွက် တိုးမြှင့်ထားသော version အသစ်ကို ထုတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
August: Ascend P7 သည် EISA အားဖြင့် 'European Consumer Smartphone 2014 – 2015' ဆုကိုရရှိခဲ့ပါသည်။
June 2014 တွင် BIG.Little GTS architecture ၊ LTE Cat6 connectivity၊ TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA /WCDMA/GSM ထောက်ပံ့ပေးသော အသွင်အပြင်နှင့် 300 Mbps အလျင်နှုန်းဖြင့်ပေါ့ပါးသွက်လက်မြန်ဆန်သည့် Kirin 920 ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
May 2014 တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်တွင် the 4G LTE Ascend P7 နှင့်ပတ်သက်၍ထုတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
Mobile World Congress 2014 တွင် ၇လက်မရှိသည့် 4G LTE-enabled MediaPad X1 ၊ Ascend G6 4G smartphone နှင့် ၈ လက်မရှိသည့် entertainment powerhouse tablet MediaPad M1 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံး ၀တ်ဆင်နိုင်သည့်နည်းပညာကိရိယာအဖြစ် bluetooth တယ်လီဖုန်းနားကြပ် နှင့်big-data tracking အရည်အသွေးရှိသည့် TalkBand B1 ကို စတင်ထုတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ 300 Mbps အလျင်ရှိသည့်မြန်ဆန်ပေါ့ပါးသည့်ဆက်သွယ်မှုလိုင်းပါဝင်သော ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး LTE Cat6 Mobile WiFi, Huawei E5786 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Consumer Electronics Show 2014 တွင် ပထမဆုံး LTE အထောက်အကူပြု 150 Mbps အလျင်နှင့်အရည်အသွေးမြင့် flagship စမတ်ဖုန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
December 2013 တွင်Huawei ၏ လက်အောက်ခံကုမ္မဏီ သီးခြားအမှတ်တံဆိပ် Honor ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး Honor 3C, 3X နှင့် E5730 တို့ ကို ထုတ်ဖော်ဖြန့်ဖြူးခဲ့ ပါသည်။
June 2013 တွင် အထူ 6.18mm သာရှိသော ကမ္ဘာ့အပါးလွှာဆုံး စမတ်ဖုန်း Huawei Ascend P6 ကို လန်ဒန်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ ပါသည်။
Mobile World Congress 2013 တွင် Global Consumer သစ်တစ်ခုဖြစ်သော ''Make it Possible" brand campaign ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Mobile World Congress 2013 တွင်ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးနှင့်တစ်ခုတည်းသော LTE Cat4 Ascend P2 smartphone ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
Consumer Electronics Show 2013 တွင် 6.1 inch ရှိသော ကမ္ဘာ့ဖုန်းscreen အကျယ်ဆုံး Huawei Ascend Mate နှင့်Huawei ၏ပထမဆုံး Windows Phone 8 smartphone ဖြစ်သော Ascend W1 ကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
Consumer Electronics Show 2013 တွင် 5-inch HD 443 PPI Super Retina မျက်နှာပြင်ရှိ သည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး Huawei Ascend D2 smartphone ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
January 2013 တွင် IDC မှ Huawei အား Q4 2012 အတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ smartphone ထုတ်လုပ်မှု အဆင့် သုံးအနေနှင့်သတ်မှတ်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
November 2012 တွင် system အသစ်တစ်ခုဖြစ်သော YouView set-top box (STB)service ကိုစတင်မိတ်ဆက်ဖြန့်ဖြူးရန် Talk Talk နှင့် UK တွင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုကာပါတနာအဖြစ်လက်တွဲဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
September 2012 တွင် UK ၌ Everything Everywhere (EE) နှင့်စပ်တူလုပ်ငန်းတွင် Ascend P1 LTE, E589 Mobile WiFi, and E392 MBB device အစရှိသည့် 4G devices သုံးခုကိုစတင်ဖြန့်ဖြူးခဲ့ပါသည်။
April 2012 တွင်UK ၌ Vodafone Telecommunication မှတဆင့်Huawei Ascend G300 Handset ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြေငြာခဲ့ပါသည်။
Mobile World Congress တွင် ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး quad-core smartphone( Huawei Ascend D1 quad) ကိုစတင်မိတ်ဆက်ဖြန့် ဖြူးခဲ့ပါသည်။
Consumer Electronics Show တွင် Fashion Smartphone ဖြစ်သောHuawei Ascend စီးရီးမှ Model အသစ်တစ်ခုအဖြစ် 6.68mm သာရှိသော ကမ္ဘာ့အပါးလွှာဆုံး စမတ်ဖုန်း Huawei Ascend P1 S ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။
August 2011တွင်Huawei မှ Huawei cloud service နှင့်စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ပထမဆုံး cloud အထောက်အကူပြု smartphone ကို Huawei အမြင်အားဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။
March 2011 တွင် Huawei မှ C8500 smartphonesone one million ကျော်ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်မိတ်ဆက်ပြီးသည့်ချိန်မှစ၍ရက် ၁၀၀အတွင်းရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါသည်။
IFA 2010 တွင် Huawei မှ Google's Android 2.2 operating system ပါဝင်သောပထမဆုံးသောIDEOS smartphone ကိုစတင်ပွဲဦးထုတ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။
August 2010 တွင် Huawei ၏ မိုဘိုင်းကြိုးမဲ့ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်စနစ်ပါဝင်သောထုတ်ကုန်များ ကူးသန်းပို့ ဆောင်မှုသည် 100 million units ထိရောက်ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ရှယ်ယာ၏ ၅၀% ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ အပြင် Huawei ၏ ranking အဆင့်အား ထိပ်ဆုံးကမ္ဘာအနှံ့ MBB ထုတ်လုပ်သူ အဖြစ်သုံးနှစ်ဆက်တိုက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ (ABI သုတေသနမှတ်တမ်းအားဖြင့်).
Mobile World Congress 2009 တွင် Huawei မှ သူ၏ ပထမဆုံး Android Smartphone ကို ပွဲဦးထုတ်မိတ်ဆက်ခဲ့ပေးပြီး T-Mobile နှင့်Huawei ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ကြေငြာရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
November 2008 Asia Mobile Awards တွင် Huawei E180 ကို 'အကောင်းဆုံး မိုဘိုင်းကြိုးမဲ့ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်စနစ်ပါဝင်သောထုတ်ကုန်' အဖြစ် အမည်ပေးသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
Huawei အနေနှင့် သူ၏ mobile WIFI design ၊ E270 အတွက် Red Dot Design Award ၊ E172 အတွက် IF Product Design Award များကိုကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်.
June 2006 တွင် ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးနှင့်အကျစ်လျစ်ဆုံး HSDPA USB Modem, E220 ကိုစင်ကာပူ၌ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ ပါသည်။
June 2005 တွင် Huawei ၏ ပထမဆုံး 3G mobile phone,U626 ကို Charlton Media Group မှ 'Best 3G Smartphone' အဖြစ်ဆုတံဆိပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
February 2004 တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံး WCDMA mobile phone ကို 3GSM Conference in Cannes, France တွင် Huawei မှထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။
July 2003 တွင် Huawei ၏ ဟန်းဆက် ဌာနကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။